Iindaba - Yintoni uFurfural?
I-Furfural yikhemikhali eyenziwe ngezinto eziphilayo eziveliselwa iinjongo zoshishino. Yenziwe ngokukodwa yimveliso yezolimo ezinje ngee-husk ze-oat, i-bran, i-corncobs kunye ne-sawdust. Ezinye zeemveliso ezisetyenzisiweyo zibandakanya ukubulala ukhula, isibulali sokubulala ukungunda kunye nokunyibilikisa. Ikwayinto eqhelekileyo kwimveliso yezibaso zokuhamba nakwinkqubo yokucoca ioyile yokuthambisa. Imichiza yinto ekuvelisweni kwezinye iiarhente zorhwebo.
urfural yikhemikhali eyenziwe ngezinto eziphilayo eziveliselwa iinjongo zeshishini.
Xa iveliswa ngobuninzi, le khemikhali yenziwa ngokubeka ipentosan polysaccharides ngenkqubo ye-asidi hydrolysis, oko kuthetha ukuba iselulosi kunye nesitatshi sezinto ezisisiseko ziguqulwa zibe sishukela kusetyenziswa iasidi. Kwisikhongozeli esingangeni moya, i-furfural i-viscous, ayinambala, kwaye ine-oyile, kwaye inevumba elifana ne-alimondi. Ukuvezwa komoya kunokufaka umbala kulwelo kwii-shades ukusuka kumbala otyheli ukuya kumbala omdaka.
I-Furfural yinto enyibilikayo yamanzi kwaye inyibilike ngokupheleleyo kwi-ether nakwi-ethanol. Ukongeza ekusebenziseni kwayo njengekhemikhali eyedwa, isetyenziselwa ukuvelisa iikhemikhali ezinje nge furan, i-furfuyl, i-nitrofurans, kunye ne-methylfuran. Ezi khemikhali zikwasetyenziselwa ukwenziwa ngakumbi kweemveliso, kubandakanya neekhemikhali zezolimo, amayeza, kunye nokuzinzisa.
Zininzi iindlela abantu abadibana ngazo noboya. Ukongeza ukubonakaliswa kwimichiza ngexesha lokulungisa, inokufumaneka ngokwendalo kwiindidi zokutya. Ukuvezwa kokukhanya kolu hlobo akukangqinwa kuyingozi.
Ukuvezwa kakhulu kobuso bendalo kunokuba yityhefu. Kuvavanyo lwebhubhoratri ebantwini nakwizilwanyana, ifurfural yafunyaniswa ukuba iyacaphukisa ulusu, inwebu yangaphakathi kunye namehlo. Kukwabikwa ukuba kubangele ukungathandeki emqaleni kunye nokuphefumla. Abanye baxele iimpembelelo zexesha elifutshane zokuchazeka kwimichiza kwiindawo ezingena moya ungabalulekanga kubandakanya ubunzima bokuphefumla, ulwimi olungenantetho, kunye nokungakwazi ukungcamla. Iziphumo zexesha elide ezinokubakho zolu hlobo lokuvezwa zinokuvela kwiimeko zolusu ezifana onokhwekhwe kunye nefotosensitization kwiingxaki zombono kunye ne-edema yemiphunga.
I-Furfural yokuqala yaqala ukusetyenziswa ngokubanzi ngo-1922 xa iQuaker Oats Inkampani yaqala ukuyivelisa nge-oat hulls. I-Oats iyaqhubeka yenye yeendlela ezithandwayo zokwenza imichiza. Ngaphambi koko, yayisetyenziswa kuphela kwezinye iimveliso zeqholo. Yaqala ukwenziwa ngo-1832 ngu-Johann Wolfgang Döbereiner, usokhemisi waseJamani owayesebenzisa imizimba yembovane ukwenza i-acid ye-formic, apho ifurfural yayiyimveliso ephuma kuyo. Iimbovane kukholelwa ukuba zisebenza ngempumelelo ekwenzeni le khemikhali kuba imizimba yazo yayiqulathe uhlobo lwezityalo ezisetyenziselwa ukwenziwa ngoku.
Ixesha lokuposa: Aug-13-2020